Fifandraisana maharitra Mampiaraka ny Indiana - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT #1 - hitsena ny zazavavy, na lehilahy online!
Fifandraisana maharitra Mampiaraka ny Indiana
Dia mety ho kely voatokana tamin'ny voalohany
Hi, aho tsotra, nidina teto an-tany ny olona izay manome lanja ny fianakaviana sy ny namanaAho mitady ny fiainana mpiara-miasa - izay mety ho kokoa ny namana. Mino mahazo mihoatra ny sakana eo amin'ny fiainana fa tsy vato misakana. Izaho dia mipetraka any Andheri izaho dia tena tsara tarehy, tsara tarehy young-looking Leo aho efa nandalo kafa nanofa kaonty fanadinana, fa tsy maintsy nisafidy fa ny fanoratana toy ny asa. Izaho no midina eto an-tany ny olona iray mahafinaritra ny toetrany. Ny olona araka ny tokony ho mifangaro ny modernity sy traditionalist. Tena nahita fianarana sy ny sanda ara-olona amin'ny fironana ara-panahy. Manao ny marina, inoana. I adama avy any Mumbai. Marina fa tsy mora ho an'ny olona mba hilaza ny momba ny tena, noho izany antony izany (fanambadiana ara-pinoana). Amin'ny natiora, izaho no tena mangina, tsara saina sy kely-pihetseham-po. Aho ho extrovert amin'ny toe-tsaina tsara manoloana ny fiainana, ary mino fa ny fanoloran-tena sy ny fahazavan-tsaina dia zava-dehibe ho fifandraisana rehetra. Fihatsarambelatsihy no lafin-javatra iray ao amin'ny olona izay mivadika ahy eny. Ny namana akaiky mieritreritra aho fa mora ny mahazo eny, midina eto an-tany sy ho amin'ny fahafinaretana. Aho fitness fahatomombanan'ny sy hitandrina ny tenako sahirana amin'ny be dia be ao an-tokantrano ny asa ny antony. Voalohany indrindra ny fianakaviana-mirona ny olona, aho tia mandany fotoana miaraka amin'ny fianakaviako. Tena tia ny fandrahoan-tsakafo, mihinana avy, fikarohana toerana vaovao sy ny fitiavana ny toetra manokana rano bod. Izaho mikarakara, matoky, malefaka niteny, homely zazavavy maoderina avy mijery mankany amin'ny fiainana. Izaho no tena-miasa tovovavy amin'ny maha-zavakanto azy ny mpampianatra. Efa nahavita ny fianarana avy ao amin'ny oniversiten'i Delhi. Mpiara-miasa tokony ho ao amin'ny Governemanta ny asa Fanompoana eo amin'ny Seha-Panjakana tamin'ny Chandigarh Mohali Panchkula. Tokony ho zava-maniry. Aho: Marina ny tongony kely lefakozatra nampihatra. Izaho Matoky, Tsara-vakio, tsara tarehy, tsy manambady, Gujarati zazavavy maoderina outlook mbola soatoavina nentim-paharazana latsa-paka lalina ao am-pony. Teraka aho ka nentiny niakatra ho ao Gujarat. Tena mahafehy tsara ny teny anglisy. Miarahaba, miezaka aho ny sehatra tsara indrindra mba hilazana ny tenako tena amin'ny saina tsy miangatra tanteraka ny fahamarinan-toetra. Izaho no tena jovial olona, foana ny te-hiaina amin'ny fomba feno, miaraka amin'izay koa tena manolo-tena, manam-pahaizana.
Efa vita diplaoma amin'ny B.
Matihanina miasa amin'ny orinasa an-Graphic com Tranonkala Mpamorona, animator sy ny fitantanam-bola. Afa-tsy fahalalana ny Cad fandrafetana ny Toetra fanentanana. Ny anarako dia Hemal Jitendra Parekh. amin'ny Literatiora anglisy. Aho mitady ankizilahy, izay no farafahakeliny nahazo diplaoma, tsy mpisotro, tsy mpifoka sigara ny VAOVAO kandidà. noni an'ny Jain, Gujarat fianakaviana. Wow tsy toy ny henjana indrindra anjara. Teraka sy lehibe tao Mumbai, efa nahita kely izao tontolo izao, ary ny ho tia ny mahita izany rehetra izany. Ny asa sary dia mety hilaza aho fa tena fatra-paniry laza bebe kokoa amin'ny fianakaviana ny akora. Aho tena nizotra tamin'izay hitsiny avy ny zazavavy. tsotra ny fiainana ao amin'ny avo fisainana dia ny moto. Afaka mitantana na an-tsaha toy ny asa ihany koa n an-trano ny asany. toy ny isan-ny fianakaviana toe-draharaha. tsipiriany bebe kokoa isika rehefa mihaona. jay Swaminarayan. Hi, izany dia tsy mora. Tsy mino aho aho lehibe amin'ny haneho ny tenako amin'ny alalan'ny fanambadiana website fa eto no manao ny marina miezaka. Aho tena amiable, mafana, saro-pady sy nidina tety an-tany. Hi, aho tena tsara tarehy, mahay canasta brahmin dia zazavavy miaraka amin'ny endri-javatra maranitra tsara tsiky amin'ny dimple aho tsara ao Anatiny Nanaovany ny Solosaina ankehitriny miasa amin'ny rafi-Trano. Pune-monina mpanao mari-trano, tsy tena ara-drariny, jovial, tsara tarehy, mahay, mavitrika, sariaka olona, mahitsy, izay tia manao ny marina. Koa, be fangorahana, ny fahalalana sy ny. Miarahaba ny Rehetra, Fahombiazana eo amin'ny fanambadiana dia tsy tonga fotsiny amin'ny alalan'ny fitadiavana ny marina ny vady, fa amin'ny maha-vady tsara. Ahoana no marina. Izaho Manokana dia ampahefatry ny fiainana efa ao Mumbai ary ny sasany manan-danja fotoana any ivelany. Mankafy mahandro sakafo. dal vary revo amin'ny tanako havia atidoha amin'ny siansa voajanahary fandrosoana amin'ny backpacking, badminton, p. Hi, tena herculean asa mba hiresaka momba ny tenako, fa kosa, mamelà ahy hanome azy ny tifitra. Ny zavatra iray aho dia azo antoka fa afaka milaza ny momba ahy fa izaho no midina eto an-tany ny olona, amin'ny fitiavana ny fanatanjahan-tena sy ny any an-tokotany. Hi, aho mihevitra ny tenako ho marin-toetra, tso-po sy ny fahafinaretana tia lehilahy. Ao ny fotoana malalaka aho toy ny milomano, mihaino mozika sy tia ny mandeha. Koa, tiako ny vakio sy mijery sarimihetsika. Koa, vao nanomboka fanao.
Izaho dia matoky sy mahafinaritra tia lehilahy izay te-afangaro amin'ny olona.
Izaho mino ny miaina fiainana tahaka ny tonga 'ny andro iray isaky ny mandeha'.
Vao nanam-potoana (izay marihina fa dia tena tsy fahita firy), dia toy ny saka. Aho Punjabi lehilahy amin'ny tombontsoa eo amin'ny raharaham-barotra, ny fanatanjahan-tena, fitaovana mozika, hira, natiora, sns. Izaho no tena fatra-paniry laza, ary miandrandra ny mivoatra isan'andro. Tiako ny natiora, ny mozika, ny bel. Miasa ho toy ny rindrambaiko mpanolo-tsaina ho an'ny Technopark mifototra amin'ny orinasa. Koa, ny fitantanana ny mineraly orinasa. Ny governemanta. Reny - nisotro ronono sy ny tompon'ny soa aman-tsara mandeha mineraly orinasa. Aho mitady mba hahita ny fiainana mpiara-miasa izay aho dia afaka ny ho namana tsara indrindra. Izaho dia mitady ny hamorona iray maha-te ho tia an-trano miaraka, hankafy ny fiainana, manao zavatra tsara ho antsika, ny fianakaviana sy izao tontolo izao. izaho no midina eto an-tany, matoky sy ny an'ny manana tsara ny fianakaviany. Izaho mankafy ny asa matihanina, ary manana tombontsoa amin'ny hetsika ara-tsosialy. Manana fanajana ny fomba amam-panao ara-pivavahana. Liana amin'ny design, mandeha, ny mozika.
Tena mora handeha, tsy misy hang dehibe momba ny saika na inona na inona.
Akanjo aina, liana amin'ny fitness. Ny iray mitady aho -Ny olona izay afaka ny ho lehibe nahatsiaro tena. mamelà ahy hilaza yak zavatra momba ny fialam-boly. Tiako movies, toy ny mozika, ny fandehanana, ny sakafo, ny fety indraindray sns. momba ny tenako. ny fomba iray dia afaka mitsara olona fotsiny mijery ny pr. Manomboka ny asa amin'ny dingana Orinasa L T, Shaw Wallace, Dhar Cements, Varun Cements. Mpanoro Hevitra(Matematika Aptitude Mpanazatra).
Tsy manana be dia be ny milaza ny momba ahy
Nampianatra kokoa ny Miarahaba, izaho no manan-tsaina, tsotra sy nidina tety an-tany ny olona amin'ny toe-tsaina tsara manoloana ny fiainana. Ny fanabeazana fepetra takina: B. (Fizika) (kilasy voalohany)Professional fepetra takina: CAIIB avy Eo. Hi, aho tsotra, matahotra An'andriamanitra, dia nidina tety an-tany lehilahy. Namana, mahafinaritra be fitiavana ary matoky loatra. Aho ho raharaham-barotra. Ary efa teraka notezaina tao Mumbai. Tiako ny fivoriana ny olona sy ny fampitomboana ny frit Ny zanany lahimatoa, efa nanao ny PhD amin'ny fahamendrehana avy amin'ny University of Houston, Texas ary ankehitriny, miasa amin'izao fotoana izao ao India. Izy no nanao ny fianarany avy drelijiozy an-tsekoly. Teraka ka nentiny niakatra ho ao Delhi. Izaho no miasa ho toy ny orinasa mpahay lalàna ary ny tsy miankina fanao. Ny mahaliana dia ahitana ny mozika, ny sarimihetsika, ary indraindray ny famakiana. Ataoko toy ny mandeha mivoaka sy hifanerasera amin'ny f.
Mba Hilazana ny tenako aho hoe matoky aho, fisainana, Sahisahy, mahafinaritra be fitiavana, be fiahiana, ny asa miompana.
Tiako tsotra, mahitsy, manan-tsaina, matoky, gal mba ho vadiko. Ny fiainana ho ahy fotsiny jour. HI misaotra noho ny liana ny fandraisana ahy. teny fampidirana fohy momba ny tenako. Aho mpiasan'ny banky miasa toy DGM, mandray anjara amin'ny famatsiam-bola lehibe tetikasa indostrialy, ny asa dia nitondra ahy ho vahiny toerana izay m. fa nijanona mba hijery ny mombamomba azy. Aho mihevitra ny tenako ho toy ny vazivazy, mahafinaritra tia lehilahy. Izaho no niteny malefaka, manan-tsaina, tsara tarehy sy mahalala fomba tsara. Nihaona miaraka amin'ny ray aman-dreny Ao Delhi, efa nomanina ny zava-drehetra amin'ny Ankit. Ankit naka ny fianakaviana ny sakafo, ary avy eo dia eo izany rehetra izany nanomboka ny fianakaviana mba haka azy avy. Isika izao manambady ary noho ny Alokaloka avy Dehradun ny Visakhapatnam dia ny fahatsiarovana. Izaho dia nanolo-kevitra azy ao amin'ny Alokaloka, ary nitsangana mba hitsena azy tao amin'ny fiangonana any Bangalore. Taty aoriana dia nanapa-kevitra izahay fa ny fianakaviana dia tokony hahafantatra ny momba ny fikasana ary isika samy nanapa-kevitra ny hanambady amin'ity taona ity. Ny andro manaraka ny Krismasy dia ny fanambadiana. Marina fa lalao natao tany an-danitra, fa ny fanambadiana dia vita eto an-tany. Sy ny Aloky ny cupid ao amin'ny tantaram-pitiavana. Hanombohana, ny mombamomba no namorona ny fianakaviana tsirairay avy ao anatin'ny fanantenana dia mety handresy lahatra antsika ho nandamina mar. 'Tena mahavariana ny fomba iray andro ny olona iray kosa miditra ny fiainana, ary tsy afaka hahatsiaro ny fomba ianao mbola nipetraka tsy misy azy ireo. 'Ny andininy eo ambony io, dia tsara, hoy isika, dia nanomboka niresaka tamin'ny janoary, dia nihaona tamin'ny Febroary, Mirotsaka eo amin'ny septambra ary izany. Haye Salafista tantaram-pitiavana izay nanomboka toy ny mahazatra handamina ny fanambadiana. Mpampakatra Rahul Dubey (Amiko)Ampakarina Akanksha rahalahy niantso ahy rehefa avy nanamarina ny mombamomba azy ao amin'ny alokaloka. Nangataka ho an'ny vitsivitsy sary hafa, dia nanontany ny momba ahy sy ny ahy. Izy no naniraka ahy liana amin'ny ny mombamomba azy. Toy ny mpikambana voasoratra anarana aho nanaiky izany ary nifanakalo ny maro. Izy dia niresaka ny finday nandritra ny andro vitsivitsy, ary tiany ny tsirairay. Noho izany, nanapa-kevitra izahay ny hihaona, ary dia izay. Nivady izahay tamin'ny novambra. Noho ny Aloky ny h. Marina fa ny fanambadiana dia natao tany an-danitra, fa ny lalao no natao teto an-tany. Sy ny Aloky ny cupid ao amin'ny tantaram-pitiavana.
izaho sy ny vadiko dia tena velom-pankasitrahana ny aloky.
Hitako ny aloky ny mombamomba azy ary tia azy. Dia naniraka ny fangatahana, nefa tsy hahazo na inona na inona valin, andro vitsivitsy nandalo ary nieritreritra aho fa mety tsy ho liana. Indray andro tsara nahazo hafatra amin'ny finday fa Zebu Causer dia nanaiky ny tombontsoa.
Inona no miandry.
Marina fa ny fanambadiana dia natao tany an-danitra, fa ny lalao no natao teto an-tany.
Sy ny aloky ny cupid ao amin'ny tantaram-pitiavana. Hanombohana, ny mombamomba no namorona ny fianakaviana tsirairay avy ao anatin'ny fanantenana dia mety handresy lahatra antsika ho nandamina ny fanambadiana. alokaloka, ny tontolo izao tsy misy. matchmaking fanompoana, naorina amin'ny tsotra ny tanjona - ny manampy ny olona hahita fahasambarana. aloky ny tambajotra sosialy toerana misahana manokana ny fitadiavana ny lalao ho an'ny fifandraisana maharitra. Amin'ny maha-mpitarika izay matetika fantatra ho toy ny fanambadiana ara-pinoana na matchmaking sokajy ity, dia efa novaina ny fomba Indiana Iray ny lehilahy sy ny vehivavy hihaona amin'ny fanambadiana ary dia niova ny fomba fitadiavana ny fiainana-mpiara-miasa.
Iraisam-Pirenena Chatroulette Hap
Bez registrace hrát Poker on-line
mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana download amin'ny chat roulette maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat free sary Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana ny vehivavy te hihaona aminao Fiarahana ho an'ny olon-dehibe tsy misy fisoratana anarana olom-pantatra eny an-dalambe video amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy plus maimaim-poana ny Mampiaraka toerana